Ukupheka ibhulogi kanye zokupheka okumnandi
Yisiphi isithako esenza izimpahla ezibhakiwe zimanzi?
Isigaba: Сook ngaphandle 0
Ufulawa isithako esiyinhloko esisetshenziselwa ukubhaka. Ukuncishiswa kwenza izimpahla ezibhakiwe zimanzi, kunezela ukunambitheka, futhi kugcina into ebhakwe yintsha isikhathi eside. Noma yimaphi amafutha, njengamafutha noma…
Kufanele ngivumele isikhathi eside kangakanani ukushisa i-grill entsha?
Ngaphambi kokusebenzisa i-grill, uzofuna ukuyikhanyisa bese uyivumela ukuthi ishise imizuzu engama-20 kuya kwengama-30. Lokhu kuvutha kokuqala kuhlanza i-grill, kususe noma iyiphi…
Kuthatha isikhathi esingakanani ukupheka u-1 3 kg weGammon?
Isikhathi sokupheka sizohluka ngokufuna isisindo senyama yakho. Ukubala isikhathi sokupheka se-gammon sikala ukujoyina. Ijoyini le-gammon elingenalutho lizo…
Umbuzo wakho: Upheka isikhathi esingakanani inkukhu ku-grill ngama-degree angama-400?
Kufanele ngipheke isikhathi esingakanani inkukhu ngama-degree angama-400? Ukubhaka Isifuba Sezinkukhu ku-400 ° F: Lokhu kuzothatha imizuzu engama-22 nengama-26 kuya ngosayizi we…
Umbuzo: Kwenzekani uma ufry spaghetti?
Kuzokwenzekani uma ufry spaghetti? Kwenzekani uma ufry ipasta eluhlaza? Ukuthosa ispaghetti esiphekiwe noma esisele kubangela ukuthi ama-noodle anamathele ndawonye, ​​futhi kube nemiphumela…
Yini engingayisebenzisa ukuhlanza ingaphandle le-grill yami ye-Weber?
Yini engingayisebenzisa ukuhlanza ngaphandle kwe-grill yami? Sebenzisa isiponji ukukhuhla uhlangothi lwe-grill yakho ngensipho yesitsha namanzi. Uma…
Uwabilisa kuze kube nini ama-lobster afriziwe?
Kuze kube nini ukubilisa i-lobster efriziwe yonke? Mboza imbiza, futhi, uma iphelele, bayeke bashunqe imizuzu eyi-10 nge-lobster eyi-1-pound noma imizuzu engu-7-8 ngemizuzu ngayinye…
Ingabe kukhona ukudla okuthosiwe okunempilo?
Uma kudliwa ngokulinganisela, ukudla okuthosiwe kungaba yingxenye yokudla okunomsoco. Ngakho-ke, uma uzibuza ukuthi 'ukudla okuthosiwe kungaba nempilo? ', impendulo ithi…
Yikuphi uwoyela okufanele ufry inkukhu kuwo?
Khetha uwoyela onephuzu eliphakeme lentuthu: ukunciphisa imifino, isinqumelo, namafutha amakinati konke kuyizinqumo ezinhle. Amafutha kufanele abe yintshi elilodwa ukujula esikhwameni,…
Ngingaba kanjani ngumpheki womugqa ohamba phambili?
Imaphi amakhono adingwa abapheki bomugqa? Nazi izibonelo zamakhono okufanele ube nawo noma owathuthukisayo njengompheki womugqa: Ukuzibophezela kwikhwalithi. Umpheki olayini kumele…
1 2 ... 5,793 Olandelayo
Sanibonani! Igama lami nginguKate futhi ngiyathanda ukupheka. Ngabelana nabafundi bami izindlela zokupheka ezimnandi namaphakethe wempilo athakazelisayo avela emhlabeni wokupheka.
Wazi kanjani ukuthi izibindi zezinkukhu ziphekwe?
Ujija isikhathi esingakanani ushizi wamakhaza afriziwe afriziwe?
Wenzani lapho kuphakanyiswa i-oda lamathumba?
Ungakwazi ukupheka inyama lapho iqandisiwe?
Kwenzekani lapho sibilisa ukudla?
Yini engingayipheka ngamathe?
Imibuzo ejwayelekile: Ingabe uyawathosa amaphiko afriziwe noma ancibilikiswe?
© 2021 Asidle?
UKUNAKEKELWA KWABAPHATHI BAKWESOKUDLA! Zonke izinto zithunyelwa kusayithi kuphela ngenhloso yokwazisa nokufundisa! Uma ucabanga ukuthi ukuthunyelwa kwanoma yini ethile kwephula i-copyright yakho, qiniseka ukuthi usithinta ngefomu lokuxhumana futhi nezinto zakho zizosuswa!